Golaha Sare ee UNWTO wuxuu caddeeyay: Warqad cusub oo ka timid Chile
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Golaha Sare ee UNWTO wuxuu caddeeyay: Warqad cusub oo ka timid Chile
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Chile • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wararka Spain • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda
Sida la filayo iyo isagoo ku hadlaya magaca 32 xubnood ee Golaha Fulinta, Madaxweynaha Golaha Fulinta ee UNWTO, José Luis Uriarte Campos oo u dhashay Chile ayaa u xaqiijiyey dawladaha xubnaha ka ah UNWTO talada Golaha Fulinta ee kulmay bishii Janaayo ee sanadkan si dib loogu doorto. Mr. Zurab Pololikashvili oo ah Xoghayaha Guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka ee muddada 2022-2025.
Wasiirka dalxiiska ee Chile waa qareen. Isaga oo ah madaxa golaha fulinta ee UNWTO, waxa uu shalay qaaday tallaabo muhiim ah. Waxa uu cadeeyay in Golaha Fulintu uu ku shaqaynayey Xeerarka UNWTO markii ay dooranayeen Zurab Pololikasgvili bishii Janaayo. Qareenadu waxay akhriyi karaan inta u dhaxaysa sadarrada.
Mr. Campos ayaa si sax ah u sharaxay shirka golaha fulinta ee la kulmay oo la sii ambaqaaday iyadoo lagu salaynayo xeerarka UNWTO, dabcan ma jirto cid waligeed su’aal ka waydiisay.
Midda kale, maaha khaladka golaha fulinta ee UNWTO, haddii golaha loo dhan yahay ee UNWTO uu xaqiijin kari waayo go’aan ay iyagu gaadheen, gaar ahaan markii ay xaaladdu is beddeshay, isla markaana aanay golaha fulinta si buuxda ula socon waxa iska beddelaya maalinta go’aanka la gaadhayo. la sameeyay iyo Shirweyne Guud.
Waxaa loo qaadan karaa in sababta dhowr bilood u dhexeeya go'aanka iyo xaqiijinta ay tahay in si sax ah loo oggolaado isbeddelada in la tixgeliyo.
Hadda waxay ku xiran tahay shirka Golaha Guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ee soo socda oo dhowr maalmood gudahood ku yeelanaya Madrid si loo xaqiijiyo ama aan loo xaqiijin talada Golaha Fulinta laga bilaabo Janaayo ee sanadkan.
Markaad eegto UNWTO, markaad eegto Xoghayaha Guud Pololikashvili, iyo marka la eego sida xubnaha Golaha Fulinta u maleynayaan maanta, waxay dareemeysaa inaan ku jirno meeraha kale, marka la barbardhigo meeshii aan joognay Janaayo, ama ka hor Sebtembar.
33-da xubnood ee Golaha Fulinta oo kala ah 1. Saudi Arabia – 2. Algeria – 3. Azerbaijan- 4. Bahrain – 5. Brazil- 6. Cape Verde – 7. Chile- 8. China – 9. Congo – 10. Ivory Coast – 11. Egypt – 12. Spain – 13. Federation Ruush – 14. France – 15. Greece – 16. Guatemala – 17. Honduras – 18. India – 19. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran – 20. Italy – 21. Japan – 22. Kenya – 23. Lithuania – 24. Namibia – 25. Peru – 26. Portugal – 27. Republic of Korea – 28. Romania- 29. Senegal – 30. Seychelles – 31. Thailand – 32. Tunisia – 33. Turkey – waxa ay u shaqaynayeen si daacad ah iyo xeerar adag oo la dejiyay. marka la codeynayo Janaayo.
Sida xeerarka hadda jira, xaqiijinta taladan ayaa lagama maarmaan u ah 2/3 aqlabiyadda Golaha Guud ee soo socda.
Xoghayaha guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili ayaa goobta dhigay golaha fulinta, isaga oo dejiyay waqti gaaban oo la qabanayo shirka doorashada. Tani waxaa lagu go'aamiyay shir ay Golaha Fulintu ku yeesheen waddankii Xoghayaha Guud ee Georgia sannadkii hore. Tani waxay haddana kor u qaadday sunnayaasha wakhtigaas.
Wasiirka Chile ma uusan hogaamin 112aad. Golaha fulinta markii go'aankan la gaaray bishii Sebtembar ee sannadkii hore ee Georgia.
Shirarka Golaha Fulintu inta badan kama dhacaan dalka uu ka soo jeedo Xoghayaha Guud.
Xiligaas ayaa mudane. Najiib Balala oo u dhashay Kenya ayaa masuul ka ahaa. Wax qarsoodi ah maaha in Balala xilligan la joogo uu taageerayo Xoghayaha Guud xaqiijintiisa toddobaadka soo socda.
Talaabadan dartiis, hal musharrax oo Bahrain ka socda ayaa ku guuleystey inuu tartanka galo isagoo aan fursad u helin inuu u ololeeyo inta lagu guda jiro xiritaanka caalamiga ah ee Coronavirus. Waligeed ma helin fursad macquul ah, 6 musharrax oo kale waxay awoodi waayeen inay soo saaraan waraaqo ku filan si ku filan muddada xaddidan, iyo inta lagu jiro kororka COVID-19 si ay u galaan tartanka. Tan waxaa ka mid ahaa xubin guddiga WTN iyo madaxii hore ee Guddiga Dalxiiska Nepal Deepak Joshi.
Haddii ay jiri lahayd laf-dhabar caddaalad ah oo ku jirta guddiga Xoghayaha Guud, wuxuu codsan lahaa in la kordhiyo habka doorashada bisha May. Taas beddelkeeda, waxa uu ku riixay in muddo aad u gaaban la siiyo Golaha Fulinta si ay mar kale isugu yimaadaan oo ay isaga u codeeyaan. Waa inuu ku qancay inuusan la kulmin tartan adag bisha Janaayo - mana uusan dhicin.
Marka sababta asalka ah ee looga guurayo doorashada May ilaa Janaayo la tirtiray, taas oo ah bandhigga ganacsiga FITUR, Xoghayaha Guud ayaa wali iska indhatiray codsi xitaa ka dib markii warqad furan ay heleen laba Xoghaye Guud oo hore, Hogaamiyaasha ay ku jiraan magacyo sida Carlos Voegeler, Professor Geoffrey Lipman, Louis D'Amore iyo kuwa kale. Warqaddu waxay ku boorisay Xoghayaha Guud inuu u gudbiyo shirka doorashada Golaha Fulinta ilaa taariikhda asalka ah ama ka sii dheer.
Xoghayaha Guud wuxuu si fiican u ogaa in ogolaanshaha wakhti dheeri ah ay furi lahayd tartanka. Taa baddalkeeda, wuxuu galiyay dadaalkiisii ​​​​oo dhan ee horseeday shirkii Golaha Fulinta ee Janaayo inuu si gaar ah wax ugu qabto waddamada golaha fulinta, isaga oo ka tagay waddamada kale ee xubnaha ka ah UNWTO iyo xiisadda korona, waxay u baahdeen iskaashi ay la yeeshaan waaxda gaarka ah, gaar ahaan WTTC oo dhinac ah.
Markii ra'iisul wasaaraha Georgia uu casho sharaf ugu sameeyay Madrid habeen ka hor doorashada, musharaxa Bahrain ayaa ka maqnaa dibad-bax.
Sida cad, tillaabadani waxa ay maroorsatay hannaan cadaalad ah, laakiin waxaas oo dhan waxa laga yaabaa in ay ku dhex jireen xeerar iyo siyaasado. Dabcan, xeerarka iyo siyaasadaha noocan oo kale ah ayaa la dejiyay markii dunidu aanay ka warqabin Coronavirus.
Sida uu sharxay mudane. Xoghayaha guud ee Francesco Frangialli in hwaa warqad furan oo la daabacay toddobaadkan, sharci kuma filna.
Marka aad habka wax u marinayso, waxa aad noqon kartaa sharci iyo anshax xumo labadaba.
Habka doorashadu waxa uu noqon karaa mid si rasmi ah waafaqsan xeerarka, laakiin isla markaasna aan caddaalad ahayn oo aan sinnayn. Dhammaadka maalinta nidaamku ma noqon doono mid anshaxeed.
Sida Sophocles u qoray: "waxaa jirta meel ka baxsan oo xitaa cadaaladu ay noqoto mid aan cadaalad ahayn".
Warqadda labaad ee furan ee uu soo bandhigay xoghayihii hore - guud ahaan arrimaha ku saabsan natiijada guddiga anshaxa, iyo natiijada lafteeda waa in ay sabab u tahay in xubin kasta oo cadaalad ah uu yiraahdo "waqti sug"
Haddaba xaqiiqooyin badan oo Golaha Fulintu garan waayay markii ay u codaynayeen Zurab Pololikashvili
Xaqiiqda ah in Hadalada qaylo dhaanta iyo dhaleecaynta sarkaalka anshaxa Warbixinteeda golaha loo dhan yahay, iyo in qaar badan oo ka mid ah saraakiishii hore ee hay’adda UNWTO hore u ahayd ay tallaabadaas qaadeen oo ay warqad furan u qoreen dalalka xubnaha ka ah waxay si cad u muujinayaan in uu jiro khalad weyn oo UNWTO ah.
Wax-is-daba-marin, ku xad-gudbid shaqaale, xaqiiqda ah inaan dhaleecaynta aan la oggolayn UNWTO waxay soo shaac baxday ka dib markii ay soo baxday warbixinta Guddiga Anshaxa.
Warbixintan ma ay ogayn Golaha Fulinta markii ay u codaynayeen Zurab:
Baaragaraafkan ku jira warbixinta anshaxa ayaa soo koobtay:
Iyadoo in ka badan 35 sano ay shaqeynayeen lix xoghaye guud oo Ururka ah, kuwaas oo in ka badan 20 sano ay u heellan yihiin anshaxa iyo mas'uuliyadda bulshada, Sarkaalka Anshaxa gudaha ayaa hadda ah sarkaalka ugu adeegga dheer ee Maraykanka. ururka.
Sababtaas awgeed, waxa ii suurto gashay in aan u kuur galo walaac iyo murugo isa soo taraya in hab-dhaqankii hufnaa ee ka jiray maamuladii hore, sida dallacaadda, kala-soocidda xilalka iyo magacaabista ay si lama filaan ah hakad ugu galeen, taasoo keentay in meel fiican loo maro. indho la'aan iyo maamul aan sabab lahayn.
Xaqiiqda ah in xubno badan oo isla Golaha Fulinta ah ay hadda si cad iyo gadaashiisaba u taageereen warqaddii ay qoreen labadii Xoghaye Guud ee hore, waa in dal kastaa sabab ku filan u tixgaliyaa natiijada ka soo baxday Guddiga Anshaxa oo leh:
… oo bal dib u eegis labaad ogow isbeddellada baaxadda leh ee dhacay intii u dhaxaysay markii Zurab la ansixiyay Golaha Fulinta bishii Janaayo, iyo xaaladda UNWTO ee maanta.
Sidoo kale Francesco Frangialli ayaa sheegay in rajadiisu ay tahay, in Golaha Guud, oo ku jira awoodda "xubinta ugu sareysa" ee UNWTO, uu samayn doono waxa lagama maarmaanka u ah si loo xaqiijiyo doorasho cadaalad ah oo ka dhacda Madrid iyo soo celinta maamulka wanaagsan ee Ururka.
Warqadda hadda uu soo gudbiyay Noofambar 24 ee Madaxa Golaha Fulinta ee UNWTO ee kulmay Janaayo 2021 waxay leedahay:
Dowladaha Xubinta Qaaliga ah,
Hannaanka doorashada ee musharrixiinta ay soo bandhigeen dawladaha Bahrain iyo Georgia, oo la fuliyay intii lagu jiray kalfadhigii 113aad ee Golaha Fulinta, ayaa u hoggaansamay dhammaan qodobbada Xeerarka, iyadoo la raacayo habraaca uu sameeyay Golaha Fulinta ee dukumeenti CE / 112/6 rev. .1, iyo sidoo kale Xeer-hoosaadka Golaha Fulinta iyo Xeerarka Guud ee Doorashooyinka ee Codbixinta qarsoodiga ah ee UNWTO.
Doorashadan oo ay ku qabsoontay cod qarsoodi ah oo ay soo bandhigeen Xubnaha Golaha Fulinta ee si habsami ah loogu aqoonsaday soo bandhigista shahaadooyinka saxda ah ee ay soo saareen xukuumadahooda, ayaa waxa ka soo qayb galay 33 xubnood oo ka mid ah 34-ta xubnood ee Golaha Fulinta ee shirka fadhiyey, kuwaas oo hore ugu soo baxay.
Ugu dambeyntii, inta lagu guda jiro kalfadhiga 113-aad ee Golaha Fulinta, hay'addu waxay go'aansatay in ay u soo jeediso Mr. Zurab Pololikashvili inuu noqdo Xoghayaha Guud ee Ururka muddada u dhexeysa 1 Janaayo 2022 ilaa 31 December 2025, iyadoo la tixraacayo taladaas natiijada sirta ah. Codbixintii u dhaxaysay Marwo Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, oo ah musharraxa boqortooyada Bahrain, oo heshay 8 cod, iyo Mr. Zurab Pololikashvili, oo ah musharraxa gobolka Georgia, oo helay 25 cod.
Dhammaan arrimaha aan kor ku soo xusnay iyo aniga oo ah Guddoomiyaha Golaha Fulinta, waxa aan caddaynayaa in muddadii ay xilka haysay dhammaan wax-qabadkii la fuliyey lagu sifeeyey Xeer-hoosaadka iyo shuruucda hadda jirta, iyada oo doorashadii Golaha Fulintu ay ku doorteen shirkoodii hore hab-raac. ku lifaaqan xeerarka.
Anigoo tix-gelinaya arrimahaas aan kor ku soo xusnay, isla markaana ixtiraamaya natiijadii ka soo baxday fadhigii 113-aad ee Golaha Fulinta, waxaan mar kale ku celinayaa in Golaha Sare ee Hay’adda Dalxiiska Adduunka, si waafaqsan qodobka 22-aad ee Xeer-hoosaadka iyo Qodobka 29-aad ee Golaha Fulinta ee Dalxiiska Adduunka. Xeer-hoosaadka Golaha Fulinta, wuxuu u soo jeedinayaa Golaha Guud Mr. Zurab Pololikashvili inuu noqdo Xoghayaha Guud ee muddada 2022-2025.
La'aanteed mid kale oo gaar ah, waxaan la xiriiraa tixgelinta iyo qaddarintayda ugu sareysa.
Guddoomiyaha Golaha Fulinta ee UNWTO,
José Luis Uriarte Campos waa qareen ka socda Universidad de Los Andes iyo shahaadada mastarka ee Siyaasadda Dadweynaha ee Universidad del Desarrollo.
Isaga oo leh ku dhawaad ​​20 sano oo waayo-aragnimo ah, waxa uu leeyahay xirfad la aqoonsan yahay oo uu ku leeyahay adduunka guud, isaga oo iftiimiyay shaqadiisa madaxa la taliyayaasha ee Wasaaradda Dhaqaalaha, Horumarinta, iyo Dalxiiska; madaxa dhulka ee Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Agaasimaha Qaranka ee Sercotec.
2014-kii waxa uu noqday Xoghayaha Guud ee Rugta Ganacsiga ee Qaranka, Adeegyada iyo Dalxiiska, isaga oo qeexaya xeelado shaqo oo cusub iyo taageerada qaybta.
Maanta waxa uu u shaqeeyaa Xoghaye Hoosaadka Dalxiiska, oo ah hay’ad ku tiirsan Wasaaradda Dhaqaalaha, Horumarinta, iyo Dalxiiska.
Waa in la ogaadaa, in sida laga soo xigtay ilo eTN ah oo lagu kalsoonaan karo warqaddan waxaa qoray Alicia Gomez, lataliyaha sharciga ee UNWTO, oo la siiyay wasiirka Chile si uu u saxiixo.
Wufuudda UNWTO waa inay u dhaqmaan si xilkasnimo leh oo ay qiimeeyaan dhammaan xaqiiqooyinka. Haddii kale dunidii dalxiisku waxay ku noolaan doontaa 4 sano oo cawaaqib xumo ah.